တရုတ်ကာကွယ် ဆေးအတွက် ငွေတစ်ပြားမှ စိုက်ထုတ်မှာမဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်. – Ever Best
တရုတ်ကာကွယ် ဆေးအတွက် ငွေတစ်ပြားမှ စိုက်ထုတ်မှာမဟုတ်တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်.
Ever Best | October 16, 2020 | World News | No Comments
တရုတ်ပြည်က Sinovac က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ နောက်ဆုံးအဆင့် late-stage domestic trial လာလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတာပါ။
Sinovac က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကို တစ်ဝက်တစ်ပျက် ငွေစိုက်ထည့်ဖို့ ပြောလာပါတယ်။ထည့်ရမှာက ဒေါ်လာ(၇)သန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်က တရုတ်ရဲ့ကာကွယ်ဆေး ပြည်တွင်းမှာ လာရောက်စမ်းသပ်မှုအတွက် ငွေတစ်ပြားမှ စိုက်ထည့်မှာမဟုတ်ပါတဲ့။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး က ငါတို့ တစ်ပြားမှ ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီကိစ္စက သဘောတူညီချက် ထဲမှာမပါဘူး။သူတို့ငါတို့ကိုလာ ချဉ်းကပ်တုန်းကငွေ အကြောင်း မပြောခဲ့ဘူး သဘောတူညီချက် အရ သူတို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီက ကုန်ကျငွေ အကုန်ပေးရမှာလေ သူတို့က ကာကွယ်ဆေး အလုံး (၁၁၀၀၀၀)ကို တို့ကို အလကားပေးမှာလေ။ ပြီးရင် သူတို့က သူတိူ့ရဲ့နည်းပညာ ကို တို့ကိုမျှဝေပြီး တို့ရဲ့ဆေးကုမ္ပဏီ တွေက ကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်နိုင်မှာလေ။
သူတို့ စမ်းသပ်ချင်ရင် လာစမ်းသပ်လို့ရတယ်။ ကိုယ့်ငွေကိုယ် စိုက်ပြီးလာစမ်းသပ်။ ငါတို့က ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ တစ်ခုနဲ့ ငွေစပ်တူထည့် စမ်းသပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါတို့က Astrazeneca အပါအဝင် အနည်းဆုံး ကာကွယ်ဆေးကုမ္ပဏီ(၅)ခုနဲ့စကားပြောထားတာ။ Sinovac ရဲ့လုပ်ရပ် ကိုရော ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကိုရော ကြည့်ပြီးပြုံးမိပါတယ်။
Richard Myo Thant (ဆရာအား လေးစားစွာ Credit ပေးပါသည်)
ဂျိုးဘိုင်ဒန် ရဲ့ နေအိမ်ကို အမျိုးသားလေကြောင်း ကာကွယ်ရေးဇုံအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ပြီ